Netherlands oo ka walaacsan halista kaga imaan karta caruurta dagaalyahanada Daacis – fogaanarag
Dowlada Holland ayaa ka walaacsan halista kaga imaan karta caruurta ay dhaleen dagaalyahanada Daacish ee haysta dhalashadooda.
Isku-duwaha waaxda ka hortaga argagixisada ee dalka Netherlands ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay xaalada 80 caruur Dutch ah oo ku nool dhulka ay maamulaan kooxda Daacish ee Syria iyo Iraq.
Dick Schoof waxa uu u sheegay Arbacadii jariirada Telegraaf ee ka soo baxda dalka Netherlands oo kala bar ku dhashay dibadda, ay khatar ugu jiraan in maskixiyan la dooriyo, ka dibna ay halis muuqata ku noqdaan amaanka dalka Netherlands.
Schoof ayaa hadalkan sheegay iyadoo horey u jirtay warbixin a daabacay oo ay soo saartay hay’ada arrimaha sirdoonka iyo amaanka Holland ee AIVD, taasoo sheegaysa in masuuliyiinta ay ka digayaan caruurtan marka ay gaaraan da’da 9 jirka.
AIVD waxay sheegtay in da’dani caruurta loo tababari karo inay isticmaalaan hubka, oo ay sameeyaan waxyaaabaha qarxa oo ka dibna loo adeegsan karo inay weeraro ka fuliyaan Iraq iyo Syria. Hay’adan amaanka ayaa filaysa in Jihaadayiin badan ay hadda ku soo laabtaan Netherlands maadaama xaalada bariga dhexe ay ku sii xumaanayso.
Madaxa hay’ada AIVD Rob Bertholee ayaa jariiradan u sheegay in booliska dabagalka iyo dowladaha hoose masuuliyiinta ay aad uga feejignaadaan khatartaasi.
‘Waa muhiin in aad looga taxadaraa qof kasta,’ ayuu yiri isagoo intaa raaciyey in aan haddana qof walba lala socdo habeen iyo maalin,’ Ilaa 280 muwaadaniin Dutch ah ayaa la og yahay inay ku maqan yihiin Iraq iyo Syria, iyadoo 50 ka mida dadkaasi ay dib u soo laabteen. Badankood waxay soo guryo-noqdeen sanadkii 2015-kii.
Masuuliyiin ka kala socota ilaa 20 dowladood oo aduunka ayaa maanta ku shirsan magaalada Hague si uga hadlaan khataraha ka imaan kara dagaalyahanada soo laabanaya.
M. Abdi Farah Afgoye